BRISTOL ကကျောင်းသားတွေက BRISTOL မှာလမ်းလျှောက်ဖို့သွားတဲ့နေရာတွေကိုပြောတယ် - သတင်း
Bristol ကကျောင်းသားတွေက Bristol မှာလမ်းလျှောက်ဖို့သွားတဲ့နေရာတွေကိုပြောတယ်
မင်းတို့ကအောက်ခြေဟောင်းတွေကိုပျင်းနေပြီးပြန်လမ်းလျှောက်သွားမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် Bristol Tab က UoB ကျောင်းသားတွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ instagram Bristol နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်အကောင်းဆုံးလမ်းလျှောက်ခြင်းများဟုသူတို့ထင်သောအရာကိုကြည့်ရှုရန်။
Bristol ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုလည်းတွေ့နိုင်ပြီး ၁၀ ကီလိုဂရမ်အဆင့်များကိုလည်းသင်ရနိုင်သည်။ Bristol ၏လမ်းလျှောက်မှု ၉ ခုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လှေများထွက်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အေးအေးဆေးဆေးရှိပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်သောပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းကိုကြိုက်သည်။ တံတားများစွာနှင့်အတူသင်ကဆိပ်ကမ်း၏ရင်ခွင်ကိုဆက်ဆက်လုပ်နိုင်သည်။ ဆိပ်ကမ်းမှကြည့်လျှင်အထက်ပါအရောင်ရှိသောအိမ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ နေသာသောနေ့၌ဤလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုလုပ်ခြင်းသည်ထိုက်တန်သည်၊ အကြောင်းမှာလေထန်သောအခါအထူးသဖြင့်အအေးမိသည်။
Ashton Court မပါဘဲအကောင်းဆုံးလမ်းလျှောက်မှုများသည်ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Ashton Court ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အမျိုးမျိုးသောလမ်းလျှောက်မှုများအပြင်အစေးနှင့် putt သင်တန်းများရှိသည်။ သင်ကသမင်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိသမင်များကိုပင်တွေ့နိုင်သည်။
3. Brandon ဟေးလ်
Brandon Hill သည်စီးတီးစင်တာအလယ်တွင်ရှိပြီး Clifton သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်၎င်းသည် UoB ကျောင်းသားအားလုံးအတွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တောင်ကုန်းသည်အနည်းငယ်မတ်စောက်သော်ငြားလည်း၎င်းသည်ထိပ်ပိုင်းရှိအမြင်များနှင့်၎င်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောတန်ဖိုးကိုရရှိရန်အမှန်ပင်ကျိုးနပ်ပါသည်။
၂၀၂၀ နေ့ ၁၂၅: Cabot Tower၊ Brandon HIll, #Bristol # 366photos2020 pic.twitter.com/zO82AwTjYa
instagram ပေါ်မှာငါ့ကို unfollowed သူကိုကြည့်ရှု
- Rob Daw (@ robdaw67) မေလ ၄ ရက်၊
The Stad Bishop လတ်ဆတ်သောတိုင်းနွေရာသီလဖြစ်သောနေရာဖြစ်သော Durdham Downs ။ Clifton သို့မဟုတ် Stoke Bishop ရှိသူများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေပြီးအဆင်ပြေသော်လည်း City Centre သို့မဟုတ် Redland ရှိသူများအတွက်လမ်းအနည်းငယ်သာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ယင်းသည်ကျွန်ုပ်အမှန်ပင်ကျိုးနပ်ပါသည်။
ရုံ Down ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုပယ် Clifton Down လမ်းပေါ်ရှိလမ်းကြောင်း။ ဓာတ်ပုံ။ Nicola Howard
5. တံတား / လေ့လာရေး
သင်တံတားသို့မရောက်ခဲ့လျှင်သင်အမှန်တကယ် UoB ကျောင်းသားတစ် ဦး လား။ တံတားအလယ်မှမြင်ကွင်းသည်အားနည်းသောနှလုံးသားအတွက်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအရာမဟုတ်သောကြောင့်သောက်စရာများပြုလုပ်ရန်လိုကောင်းလိုပေမည်၊
တံတား၏လှပသောမြင်ကွင်းများနှင့်အတူ A4 သို့စီးဆင်းနေသော Zig Zag မှမြင်ကွင်း (သို့သော်လမ်းပေါ်တွင်မတ်စောက်စွာ)
အလယ်အလတ်အဆင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းဖြစ်သော Ahhh Clifton Village ။ အဘယ်ကြောင့် Clifton န်းကျင်လှည့်လည်ယူမဟုတ်လော Parsons မှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ် Mall Deli (အခြားစားသောက်ဆိုင်များမှတစ်ဆင့်ရနိုင်သည်) နှင့် Crescent (ဥရောပတွင်အရှည်ဆုံးလခြမ်း (အနည်းဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာအရဆိုလျှင်)) တွင်သို့မဟုတ်စည်လမ်းဘက်တွင်စိမ်မည်။
ဓာတ်ပုံ။ Nicola Howard
၇။ Blaise Castle
Blaise Castle သည် Clifton နှင့်တစ်နာရီခွဲခန့်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ သို့သော်နှစ် ၂၅၀ နီးပါးမိုက်မဲမှုနှင့်အတူ၎င်းသည်သမိုင်းကိုစိတ် ၀ င်စားသူများအတွက်အလည်အပတ်သွားရန်ထိုက်တန်သည်။
အင်္ဂလန်, Blaise ရဲတိုက် https://t.co/em60tarFT9 pic.twitter.com/XcfRzlSRNQ
- ရှေးမူလရင်းမြစ် (@ancientorigins) ဖေဖော်ဝါရီလ 20, 2021
ဘယ်လို tik Tok ကျော်ကြားဖြစ်
ရေချိုးရန် Bristol က
ဒီလမ်းလျှောက်တာကတိုတောင်းတဲ့လမ်းလျှောက်တာထက်တစ်ရက်ခရီးတစ်ခေါက်လောက်ပဲဖြစ်တယ်၊ ၎င်းသည်ပြီးစီးရန်လေးနာရီခန့်ကြာပြီးတစ်နာရီ ၁၂ မိုင်သာကွာသောကြောင့်စာမေးပွဲများပြီးဆုံးချိန်တွင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တစ်မြို့တည်း၌မြို့နှစ်မြို့ရနိုင်သဖြင့်ကြိုးစားရကျိုးနပ်လိမ့်မည်။
ငါမင်းကိုမြှင့်တယ် မနေ့ကညနေမှ Bristol မှ Bath သံသရာလမ်းကြောင်းကို pic.twitter.com/L57423ua62
- Natty Matt (@ spartanmattbs3) မတ်လ 17, 2021
လူများစွာသည် Kingsdown အရောင်များရှိသောအိမ်များအကြောင်းမသိကြသော်လည်း၎င်းသည်စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက်သေချာသည်။ ကောင်းမွန်သောလှေခါးထစ်အိမ်များ၊ လမ်းများတောက်ပ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများနှင့် Nine Tree Hill မှတစ်ဆင့် Stokes Croft သို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ သင်သည်တောင်ခြေအောက်ရှိလွတ်လပ်သော El Jefe Jose Cubanos ကဖေးမှကော်ဖီသို့မဟုတ် empanada ကိုရယူနိုင်သည်။
ကျောင်းသားပါဝင်မှု၊ မှတ်စုတိုများ၊ သတင်းများနှင့်မဲရုံများအတွက် instagram ပေါ်တွင် @thebristoltab ကိုလိုက်နာပါ။
• Ru Paul ရဲ့ Drag Race ကြယ်ပွင့် Miz Cracker Bristol ကစိတ်ကျန်းမာရေး Podcast တခုကိုပူးပေါင်းခဲ့သည်
UoB ကျောင်းသားများအဆိုအရဤနေရာသည် Bristol ရှိနေဝင်ချိန်ကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးခြောက်နေရာဖြစ်သည်